Murtii Uummati jedhe ni fudhanna jedhan obbo H/Maariyaam Dessaaleny
Filannoo biyyoolessaa Itiyoopiyaaf sagalee kennuuf guyyootiin sadii qofti hafee wayita jiru kanatti paarlaamaaf ibsa kan kennan muummichi ministeeraa H/Mariyaam Dessaaleny gaaffii dhiyaateef deebii kennaniiru.Paarlaamaatti kan isaan argaman sagantaa gaaffii fi deebii idleef ta’us muummichi ministeerichaa kan isaan irratti fuuleffatan filannoo biyyoolessaa irratti ture.
Hanga ammaatti kan nagaa haqaa fi demokraatawaa ti jechuu dhaan torban kana koreen hoji raawwachiistuu IHAGDEG gamaaggama inni geggeesse irra deebi’anii jiru. Muummichi ministeerichaa uummata Itiyoopiyaaf ergaa dabarsaniin murtii kee ni simanna jedhaniiru, mormitootaafis yaadachiisa kennaniiru.
Murtii ati murteessiteef hundumti keenya kan bitamnu ta’uu ibsuu dhaan hoogganoota gareeleem mormituu toora dogoggoraa irra deeman dabalatee yaada isaanii irra deebi’anii itti xiinxaluu dhaan filannoo nagaa fi demokraatawaa ta’eef akka of qopheessan carraa kanaan waamichan dabarsa. Kana ala sosso’uu taanaan mootummaan waan barbaachise mara gochuu dhaaf akka ta’utti uummata bal’aa biyya keenyaaf ibsuun fedha jedhan. Hoogganoonni paartii mormituu hagi tokko garuu ba’ii filannoo simachuu dhaaf qophee miti jechuu dhaan muummichi ministeerichaa qeeqaniiru.
Jalqabuma isaa irraa filannoo nagaa, dimokraatawaa, kan walabaa fi haqaa geggeessuun filannoo kan hin qabaanne fi daandii kana qofaa irra adeemna jedhanii kan hin murteeffanne yaada guutuu hin taaneen filannoo kanatti kan seenan yoo danda’ames malli ittiin jeeqama kaasan yoo jiraate sana raawwachuu yaalla kanneen jedhanii fi fedhii uummanni Itiyoopiyaa filannoo nagaa, demokraatawaa fi walabaa geggeessuuf qabu kan hin hubanne hagi tokko sochii isaan godhantu argamaa jira jedhan.
Dhimmi isaa isaan ilaallata kan jedhan hoogganoota mormituu maqaa isaanii hin tuqneen gocha raawwatame jedhan garuu fakkeenya tuquun ibsaniiru.
Fakkeenya haga tokko fudhatanii agarsiisuun ni danda’ama. Wiirtulee filannoo fi naannolee filannoo haga tokko keessatti ammumaa nutu injifate yoo injifatamne immoo filannoon sun wal dha’eeraa ti, kana hubattanii deebii kennuu qabdu jedhanii hoogganoonni mormitootaa hagi tokko ennaa uummata dadamaqsan ni dhageenya. Kana jechuun immoo duulli isaan geggeessan murtii uummataaf dhimma kan hin qabaanne, murtii uummati murteessu simatanii hojii irra oolchuuf fedha dhabuu dha jedhaniiru.
Deggertoonni isaanii kanneen dadammaqiinsa akkasiin afaan fajjeessaman jedhu obbo H/Mariyaam isaan injifatan malee uummati qaama ka biroo yoo filate filannoon sun waliin dha’ameera waan ta’eef injifatamnee jirra kana immoo deebisiisuu nu irra jiraata kanneen jedhaniif duula dogoggoraa kanneen geggeessan hoogganoonni mormitootaa jiru jedhan.
Hoogganoota gareelee mormituu duulli filannoo isaan geggeessan hagi tokko deggertoota koo haala hin barbaachifne keessa ka seensisan jechuu dhaan muummichi ministeerichaa yaadachiisaniiru. Qaamota kanneen seeraan ala socho’an irratti illee tarkaanfiin kan fudhatamu ta’uus akeekkachiisanii jiran. Sochiin akkasiis naanna’ee hoogganootuma sana nyaachuu waan danda’uuf of eeggannoon akka qaban gorsa kennuun fedha jedhan.
Shabiyaa fi deggertoonni isaas Itiyoopiyaa jeequu hin dhaabne odeeffanno hundee hin qabaanne raabsuu dhaan uummaticha yaaddessuu yaalaa jiru jedhan. Uummatis odeeffannoo kijibaaf gurra isaa hin kennu amantii jedhu qabna jedhaniiru.
Uummatichi heddumminaan ba’ee kaardii filannoo akkuma fudhate akkuma kana ba’ee paartii fedhe akka filatu waamichan dabarsa jedhan muummichi ministeeraa itiyooopiyaa H/Mariyaam Desaleny. Taajjabdoonni filannoo kan sadarkaa addunyaa kan hin argamneef sababaa rakkoo bajataaf ta’uu ibsanii qamni kami iyyuu taajjabduu danda’a jedhan.